အသစ်ကလေးအတွက် Ethic???? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » အသစ်ကလေးအတွက် Ethic????
Posted by Swal Taw Ywet on Oct 17, 2013 in Complaint / Claim, Environment | 14 comments
မန္တလေးဂဇက်မှာပျော်နေတဲ့ စွယ်တော်ရွက် ကိုခေါင်းကိုက်အောင်လုပ်နေတဲ့ အသစ်ကလေးကြောင့်ပါဗျာ။ကူကြပါဦး။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ကျနော့် သင်တန်းမှာ Model မျိုးစုံနဲ့လေ့ကျင့်နိုင်အောင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းလေးတွေ ထပ်ဝယ်ရင်း အဲဒီ အသစ်ကလေးနဲ့တွေ့ခဲ့တာပါဗျို့။ လှတော့တော်တော်လှတယ်။ ဗီယက်နမ်ကလာတာလို့ပြောတာပါဘဲ၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပလပ်စတစ်အိတ်လေးနဲ့ ထုပ်ပိုးထားပါတယ်။
ဗျာ…….ဟာ…….ဟာ.. လူမဟုတ်၊နတ်သမီးမဟုတ်ပါဗျာ၊ မီးခေါင်းအသစ်လေးတွေအကြောင်းပြောနေတာပါ၊ဘာတွေလျှောက်တွေးနေတာတုံး၊၊၊ဟီ ဟိ၊။
အထဲမှာ အညွှန်းစာရွက်လေးလဲပါတယ်၊ ဖတ်ကြည့်မိတော့ ဗီယက်နမ်လို ၃ ကြောင်း၊ အင်္ဂလိပ်လို ၃ ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်၊ အင်္ဂလိပ်လို ရေးပြထားတာလေးတွေကို ကိုယ်နားလည်သလောက် ဘာသာပြန်ကြည့်မိလိုက်တော့ ဒီလိုနားလည်မိပါတယ်ခင်ဗျ။
Plastic Lamp Holder With Impact Resistance.= ထိခိုက်မိတဲ့ဒဏ်ခံနိုင် အောင် ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့မီးခေါင်း။ မတော်တဆလွတ်ကျ၊ထုရိုက်မိရင် အလွယ်တကူ မကွဲနိုင်ဘူးပေါ့။
Only Used For Compact Light.= Compact Light များတွင်သာ သုံးစွဲပါရန် တဲ့။
Compact Light ဆိုတာ အခုနောက်ပိုင်း Energy Saving ဆိုပြီးခေတ်စားလာနေတဲ့ မီးချောင်းကွေး၊မီးချောင်းခွေ စသဖြင့် ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေကြတဲ့ Compact Fluorescent Lamp (CFL ) ကိုရည်ညွှန်းတာလို့နားလည်မိပါတယ်၊ မီးချောင်းသေးသေးလေးတွေကို အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာ သုံးပြီးလင်းအောင်လုပ်ထားတာလေးတွေလေ။ အဟီး တချို့ကများဆို မီးသီးကွေးလို့တောင်ခေါ်သေးဗျ။
အပူဓါတ် သိပ်မထွက်တာရယ်၊ မီးအားမပြည့်လည်းလင်းအားကောင်းတာရယ်၊ သက်တမ်းအာမခံပေးတာလေးတွေလည်းရှိတာရယ်ကြောင့် လူသုံးများလာတာလေးတွေပေါ့။
Not Used for Incandescent Bulb.=( ရှေးရိုး ) တန်စတင်နန်းမျှင်သုံး မီးသီး မီးလုံးများအတွက် အသုံးမပြုပါနှင့်။ တဲ့။
Incandescent Bulb လို့သုံးထားတာခင်ဗျ၊ စာလုံးပေါင်းရှည်ရှည် ခက်ခက် မို့ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတွေတောင် သိပ်မှတ်မထားမိမယ့် စကားလုံးပါ၊ အတိုကောက် Bulb လို့ဘဲ ခေါ်နေ သုံးနေလေ့ရှိတာပါ။တန်စတင်နန်းမျှင်သုံး မီးသီး မီးလုံးများ ဟာ လျှပ်စစ်စီးရင် အလင်းရောင်ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်၊ တပြိုင်နက်တည်း အပူဓါတ်ကိုပါထုတ်လုပ်ပေးနေတာပါခင်ဗျ။
အညွှန်းစာရဲ့ အဆိုအရ အဲဒီမီးခေါင်းများသည် အပူဒဏ် ခံနိုင်ရည် လျော့နည်းမယ်လို့ နားလည်လိုက်ပါတယ်။
ပိုပြီးသေချာအောင် ကျနော့်ဆီမှာရှိနေတဲ့ ၄၀ ၀ပ်အား တန်စတင်မီးလုံးလေးထွန်းပြီး စောင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ် ။ နာရီဝက်အကြာမှာ ပလပ်စတစ်ပျော့လာပါတယ်၊ တစ်နာရီအကြာမှာ စတင် အရည်ပျော်ကျလာပါတယ်၊ ကျနော် ဆက်မစမ်းသင့်တော့ဘူးလို့ယုံကြည်လို့မီးပိတ်ပြီးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံဘဲ ရိုက်ထားလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ ၄၀ ၀ပ်မီးသီးလေးနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်တာပါ။
မီးဖွင့်ချိန် ၁နာရီအကြာမှာ ဘဲဥပုံဖြစ်လာတဲ့ ပလပ်စတစ်မီးခေါင်း။
အဲဒီအချိန်ကစပြီး ကျနော် ခေါင်းခဲနေတော့တာမို့ အခု ပို့စ်တင်ပြီး ထင်မြင်ချက်တွေတောင်းခံရတာပါ။ ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးပါဦးနော။
( ၁ ) အဲဒီလို အားနည်းချက်ရှိနေတဲ့ အကြောင်း အများပြည်သူသိအောင်ဘယ်လိုအသိပေးရမှာပါလည်း??
( ၂ ) Company နာမည်ကိုဖေါ်ပြပေးသင့်ပါသလား??၊ သူ့ ပစ္စည်းအကြောင်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေ ထည့်သွင်းဖေါ်ပြပေးထားလို့ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ တာဝန်ကျေပြီးသားမို့လို့ပါ။
ပစ္စည်းပေါ်မှာ ဘာ အမှတ်အသား မှ ရိုက်နှိပ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ လုံးဝပြောင်ချောပါခင်ဗျ။ ပလပ်စတစ်အိတ်ပေါ်မှာဘဲ တံဆိပ်ရိုက်ထားတာပါ။ အကယ်လို့ Company နာမည်ဖေါ်ပြလိုက်လို့ ၀ယ်သူမရှိတော့ဘူးဆိုရင် လက်ဝယ်ရှိထားပြီးသားအရောင်းဆိုင်တွေက အပေါ်က ပလပ်စတစ်လေးကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီး ရောင်းမှာပါ၊ တွဲထည့်ပေးလိုက်တဲ့ သတိပေးစာရွက်လေးတောင်ပျောက်သွားတော့မှာပါ။
သတိပေးစာရွက်လေးမှာ မြန်မာလိုလုံးဝမပါပါ၊ ပါနေတဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုစာသားကိုလည်း ဖတ်မိသူတွေ အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်မယ်မထင်ပါ၊ အဆိုးဆုံးသိနေမိတာက ကျနော်တို့ ပြည်သူားတွေ အညွှန်းဖတ်တာဆိုလို့ တိုင်းရင်းဆေးဝါး အညွှန်းဘဲဖြစ်နေလို့ပါ။ ကျန်တာတွေ လုံးဝနီးပါး ဖတ်လေ့မရှိတာပါခင်ဗျာ။
ရွေးချယ်ခွင့်၊လွတ်လပ်စွာရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့်ကို အသံကျယ်ကျယ်အော်နေတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူားတွေက တစ်ချို့နေရာကျတော့ ရွေးနေရရင် မကြိုက်ချင်ပြန်ဘူးဗျ၊ အခုမီးခေါင်းလို တွေ့ရာမီးလုံးလည်း လဲတပ်လို့မရဘူး Compact Light တစ်မျိုးတည်းသာတပ်သုံးလို့ရမယ်ဆိုရင် ရွေးတော့မှာမဟုတ်ပြန်ဘူး။ ထားတော့ အခုမီးခေါင်းအသစ်ဝယ်တာ၊ အညွှန်းစာကိုနားလည်လို့ Compact Light တော့ အခုဝယ်တပ်လိုက်ပါမယ်၊ အဲ အညွှန်းစာရွက်လေးကိုလွှင့်ပစ်လိုက်မှာလဲ အသေအချာပါဘဲဟုတ်။ ကာလတစ်ခုကြာလို့ တပ်ထားတဲ့ မီးကွေး ကြွမ်းသွားတဲ့အခါ အလွယ်ရတဲ့ တန်စတင်မီးလုံးပြောင်းတပ်မိလိုက်ရင် မခက်ပါလား။ အပူဒဏ်မခံနိုင်တဲ့ မီးခေါင်းမှာ အပူဓါတ်ထုတ်ပေးတဲ့ မီးသီးတွေ တပ်ပြီးသုံးလိုက်မိရင် မီးဖွင့်ထားတာအချိန်ကြာလာတဲ့အခါ ပထမဆုံး မီးခေါင်းပျော်ကျ သွားပါမယ်၊ မီးခေါင်းမှာ ဆက်သွယ်တပ်ဆင်ထားတဲ့ ၀ါယာကြိုးတွေ အချင်းချင်း ထိတွေ့သွားပြီး Short Circuit ဖြစ်တဲ့အခါ ၀ါယာကို ကာကွယ်မှုပေးရမယ့် ဖြူးစ် ပြတ်သွားရင်တော်ရဲ့ မပြတ်ပဲ ၀ါယာကြိုးတစ်လျှောက်မီးလောင်သွားမှ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်မှာပါခင်ဗျ။ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ဖြစ်နိုင်မှာတော့ သေချာနေပါတယ်။
အခုစွယ်တော်ရွက်မြင်မိတွေ့မိနေတဲ့ အပူဒဏ်မခံနိုင်သော လျှပ်စစ်မီးခေါင်းအသစ်လေးကနေ နဲနဲလေးရှေ့ဆက်တွေးကြည့်ပေးပါဗျာ။
တင်းကြပ်မှုမရှိတဲ့ ဥပဒေတွေကိုဘဲ လက်ညှိုးထိုးရမှာလား၊
ဖြစ်ကတတ်ဆန်း အလွယ်သုံးတတ်တဲ့အလေ့ကိုဘဲ ပုံချရမှာလား။
Company တွေရဲ့ ကျင့်ဝတ်စောင့်ထိန်းမှု Ethic ကိုဘဲဝေဖန်ကြရမှာလား၊
အများပြည်သူတွေ အန္တရာယ်နဲ့ကြုံမှာမြင်နေတဲ့ ကျနော်တို့လိုသူတွေ လိုက်နာရမယ့် Ethic က ဘယ်အထိလဲ။ ဘယ်လောက်အထိအော်သင့်ပါသလဲ။
အမယ်ဘုတ်ရဲ့ သူ့ချည်ခင် ဖြစ်နေမယ်ဗျ
ဟိုဘက်ကလည်း ဒီဘက်က အားနည်းချက်ပါ လို့ ထောက်ပြ၊ ဒီဘက်ကလည်း ဟိုဘက်က တာဝန်မကျေတာပါလို့ ပြန်ပြော နဲ့
ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ အညွှန်းနဲ့ အတိအကျ ပြောထားတာမို့ ရှင်းပြရမယ့် တာဝန်က ဆိုင်တွေဘက်ကို လှည့်လာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
လုပ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာကို ပြောရရင်
ဝယ်သူတွေကို သေချာ အကျိုးအကြောင်း ပြောရောင်းဖို့ ဆိုင်တွေကို တိုက်တွန်းပေးလို့ ရတယ်
ဒါတွေက ဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုတာ မီဒီယာကနေ ပြောနိုင်တယ်
အဲလို အဲလိုလေးတွေတော့ တွေးမိသွားတယ်ဗျာ
အတွေးများနဲ့ ချာချာလည်. . . .
အင်း သဂျီးစကားငှားပြောရရင်တော့ စနစ်ကြောင့်မဟုတ် တဲ့။ ကျွန်မတို့တောင်အညွန်းကိုဖတ်မိမယ်မထင် ဘူး။ ဖြစ်တော့မှပဲသိတော့မှာ။ ခက်တော့ခက်တယ်။ ရောင်းတဲ့သူတွေကလဲသိချင်မှသိမှာ။ အင်း ဒုတ်ခဒုတ်ခ
Only Used For Compact Light.
Not Used for Incandescent Bulb.
ခက်တာက ၀ယ်သုံးတဲ့ လူအမျာစု နားမလည်နိုင်တာက ပြဿ
နာ ..ဆိုတော့..ခင်ဗျား ဆောင်းပါးကောင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့
အထောက်အထားဓါတ်ပုံ နဲ့ မီဒီယာကိုရေးပို့ဗျာ
ကျုပ်ကတော့ ဒီထုတ်ကုန်ကို အများပြည်သူသုံးသင့်တယ်လို့ လက်မခံနိုင်ပါ..
မီးထွန်းရင် အပူထွက်မှာက တန်စတင် မီးလုံးမှ ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ပါ..
အကယ်၍ မီးခေါင်းထဲက မီးသီးနဲ့ ထိတွေ့မယ့် contact point နေရာတွေမှာ မထိတထိဖြစ်လို့ spark ထွက်ရင်လဲ အပူထွက်နိုင်တာပဲ..
မီးခေါင်းကို ၀ါယာကြိုးနဲ့ တပ်ဆင်တဲ့နေရာမှာ ပစ်စလက်ခတ် မမိတမိလုပ်ထားရင်လဲ အပူထွက်နိုင်တာပဲ
(ဒီခေတ်မီးဆင်တဲ့ကိုယ်တော်တွေ ၀ါယာကြိုးစထိပ်ကို ပါးစပ်နဲ့ကိုက်ဖြတ်၊ ပြတ်ပါမသွားပဲကျန်နေတဲ့ ကြေးဝါယာမျှင်တစ်ချို့ကို ဖြစ်ကတတ်ဆန်း လက်နဲ့ရစ်ပြီး တုပ်ထည့်လိုက်တာတွေ များမှများ…)
ဘယ်နည်းနဲ့ပူပူ ပူလာရင် ပလပ်စတစ်အပျော့က အရည်ပျော်မှာပဲ…
အဲသည် ဗီယက်နမ်မီးပစ္စည်းတွေကို ကျုပ်လဲ တော်တော်သုံးထားပါကြောင်း…
သူ့ထဲက ကြေးသားက တရုတ်အပေါစားထက်လဲကောင်း
ပစ္စည်းတန်ဖိုးက တံဆိပ်ကောင်းကောင်းတွေထက်လဲ တ၀က်လောက်သက်သာနေလို့ ဖြစ်ကြောင်း….
တန်ဘိုးက ပို ကြီးနေတာလားလို့ပါ ဦးပါရေ။
ကျနော် Junction Square City Mart က၀ယ်တာ ကပ်ခေါင်း ( အသားတံဆိပ်ပါ ) ၃၅၀ ကျပ်၊
ဗားကရာ မီးပွီုင့်နားက ၀ယ်တာ တွဲလွဲခေါင်း ( ပုံထဲက ပစ္စည်း ) ၄၀၀ ကျပ် ခင်ဗျ။ တရုပ် က ၃၀၀ ကျပ်နဲ့ ရ တယ်နော်။
ဖတ်မိသူတွေ အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်မယ်မထင်ပါ၊
ထည့်ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ် ကိုစွယ်တော်ကြီးရေ…။
မီဒီယာအကူအညီနဲ့ ကျယ်​ကျယ်​ပြန့်​ပြန့်​ ​အော်​သင့်​ပြီအစ်​ကို​ရေ..
ပညာရပ်​ဆိုင်​ရာ စကားလုံး​တွေကို သာမန်​လူ​တွေမသိနိုင်​ပါဘူး… ဗမာလို​ရေးထားလည်း ဖတ်​မှာမဟုတ်​..ဆို​တော့..
အ​ကောင်းဆုံးက ဒီနိုင်​ငံအတွက်​ ဒီ​လောက်​ကန့်​သတ်​ချက်​များတဲ့ပစ္စည်းမျိုးမသုံးတာ​ကောင်းပါတယ်​။
တစ်ယောက်ရဲ့ အမှားနဲ့ လူအများ ထိခိုက်မဲ့ ကိစ္စကတော့ အသိပေးသင့်ပါတယ်။
ကျနော် လို လူမျိုးဆို ဒီလောက် ရှင်းပြမှပဲ သိတာ၊။
အညွှန်းတို့ ဘာတို့ဆိုတာ ဖတ်တာဟုတ်ဘူးးးး
ကောင်းကျိုးနဲ့ ယှဉ်တဲ့ လုပ်ရပ်၊ ကောင်းမှု နဲ့ ယှဉ် တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးတော့ အားပေးတယ်။
လူအများမြင်နိုင်ဖတ်နိုင်မယ့် သတင်းစာ၊ဂျာနယ်တွေကို ဒီအကြောင်း ဓာတ်ပုံနဲ့တကွ ဆောင်းပါးလေး ရေးပို့သင့်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီကို တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် အားမနာပါနဲ့။
ဒီပို့စ်အတွက် အများပြည်သူကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။
ကမာရွတ်တိုင်းမ် ကိုတော့ စာမူပို့ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ။
ကုမ်ပဏီ နာမည်တော့ ထည့်မပေးဖြစ်လိုက်သေးဘူး။
ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ သူ့ ပစ္စည်းအကြောင်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေ ထည့်သွင်းဖေါ်ပြပေးထားလို့ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ တာဝန်ကျေပြီးသားမို့လို့ အပြစ်ပြောလို့တော့ မရနိုင်ဘူး။
သုံးစွဲသူတွေဘက်က အညွှန်းမဖတ်ပေမယ့် သုံးစွဲဖို့ တပ်ဆင်ပေးမယ့် လျှပ်စစ်ပညာရှင်တွေကတော့ သိနိုင်ကောင်းပါရဲ့။
ကိုယ်နားမလည်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုရင် ရောင်းချသူတွေကို အကြံဥာဏ်တောင်းတာလည်း မဆိုးဘူး။
အကောင်းဆုံးကတော့ မြန်မာလိုအညွှန်းလေး ထည့်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေလောက်ပြီထင်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို သွင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေမှာ အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ အားလုံးကို မြန်မာစာနဲ့ အညွှန်းတွေကို ထင်သာမြင်သာတဲ့ နေရာတွေမှာ သေချာစွာရေးထားမှ သွင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေကို ပြဌာန်းပြီး၊ တိတိကျကျ လုပ်ရမယ်။ ဒါအမျိုးသားရေးပါ။
မြို့တွေမှာ မီးလောင်ရင် အများစုက ဝါယာရှော့ကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ တစ်နေ့က ပန်းဆိုးတန်းမှာ လောင်တဲ့မီးကလည်း ဝါယာရှော့ကြောင့်ဖြစ်တာပဲ။
နောက်တစ်ခုက လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကို အထက်ကျောင်းတွေမှာ သင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ မဖြစ်မနေသင်ပေးသင့်တယ်။